Khubarada Ciyaaraha Oo Isku KHILAAFAY Saadaasha Kulanka Arsenal vs Manchester United – Latest Sports News
Khubarada Ciyaaraha Oo Isku KHILAAFAY Saadaasha Kulanka Arsenal vs Manchester United
Manchester United ayaa isku diyaarinaysa safar ay ku tegayso caasimadda Ingiriiska ee London oo ay Axadda kula soo ciyaari doonto Arsenal, kaddib markii ay labada kooxoodba kasoo laabteen Faransiiska.
Manchester United ayaa 3-1 kusoo garaacday PSG, waxaanay u gudubtay siddeed dhamaadka Champions League, hase yeeshee Arsenal oo lugta koowaad ee wareegga 16-ka Europa League kula soo ciyaartay Rennes ayaa lasoo laabatay khasaare 3-1 ah.
Axadda ayey labadooduba garoonka Emirates ku ballansan yihiin, waxaanay ciyaartoodani muhiim ka tahay hirdanka booska kaalinta afraad ee horyaalka Premier League oo ay isku haystaan saddexda kooxood ee Chelsea, Man United iyo Arsenal.
Kulankan muhiimka ah ayaa waxa uu keenay in khubarada ciyaaraha ee BB Sports iyo Sky Sports ee Mark Lawrenson, Michael Owen iyo Paul Merson ay isku khilaafaan saadaashiisa.
Saddexdan khabiir oo kulamada usbuuca saadaal kasii bixiya, ayaa waxay saddex saadaaliyeen saddex natiijo oo kala duwan, hase yeeshee aan kala fogeyn.
Mark Lawrenson ayaa ciyaartan ku saadaaliyey inay ku dhamaan doonto barbar-dhac 1-1 ah, laakiin waxa ka duwanaaday Pauul Merson oo qaab ka duwan u dhigay.
Paul Merson oo ka hadlayey Sky Sports ayaa waxa uu yidhi: “Ma odhan karo waxay go’aaminaysaa booska afraad iyadoo ay Chelsea halkaa joogto. Waxay ku jirtaa gacanta Chelsea xaqiiqadii (inay soo gasho afraad), laakiin waxay ila tahay in midkooda guul-darraysta ciyaartan uu dhibaato geli doono, markaa waa ciyaar weyn, waxaanay noqon doontaa mid goolal layska dhaliyo.”
Paul Merson ayaa saadaashiisa ku sheegay in labada kooxood ay dhibcaha ku wadaagi doonaan 2-2.
Halyeygii hore ee Liverpool ee Michael Owen oo isaguna ka mid ah khubarada ciyaaraha ee wariyenimada isku beddelay ayaa waxa uu bixiyey saadaal ka duwan midda Lawrenson iyo Merson, waxaana uu guul u rajeeyey Manchester United.
“Arsenal waxay soo guuleysanaysay siddeedii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee garoonkeeda, laakiin Manchester United ayaa bishii January ku garaacday kulankii FA Cup-ka, waxayna ila tahay in Ole Gunnar Solskjaer uu guuleysan doono ciyaartii toddobaad ee xidhiidh ah ee ka tirsan horyaalka ee uu bannaanka kusoo ciyaaaro.” Sidaas ayuu yidhi Owen oo la hadalyey BetVictor blog.
“Kaliya City oo 42 dhibcood heshay ayaa kulamada garoonkeeda kaga guulo badan Arsenal oo 38 dhibcood ka heshay, laakiin waxaan dareensanahay in United ay aad uga fiicnayd ciyaartii ay kasoo guuleysatay ee FA Cup-ka, haddana waxay kusoo guuleysan doonaan si furan oo madadaalo ah, balse xafiiltan badan.” ayuu ku daray.